सिमा विवादबारे भारतका विदेश सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई के भने ? हेर्नुहोस मंसिर १२ गतेका मुख्य समाचारहरु - Enepalese.com
सिमा विवादबारे भारतका विदेश सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई के भने ? हेर्नुहोस मंसिर १२ गतेका मुख्य समाचारहरु
इनेप्लिज २०७७ मंसिर १२ गते ३:१९ मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । बिहीबार नेपालमा आएका उनले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।
बिहीबार काठमाडौं आएदेखि उनी निरन्तर भेटघाटमा छन् । उनले परराष्ट्र सचिवस्तरको बैठकमा सहभागी हुनुका साथै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् । शुक्रबार उनी गोरखा र मनाङमा भारतको सहयोगमा निर्माण भएका घर र धार्मिक स्थल उद्घाटन गर्न जाने कार्यक्रम तय भएको छ । हेर्नुहोस मंसिर १२ गतेका मुख्य समाचारहरु